Gufgaf|Online थाहा नै नपाई लभ पर्यो - रेयर राई
थाहा नै नपाई लभ पर्यो - रेयर राई
गफगाफ- पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रहरुमा कमेडी भुमिकाका लागी कलाकार रेयर राईलाई रुचाउना थालिएको छ । चैत्र २९ गतेबाट अल नेपाल प्रदर्शनको तयारीमा रहेका ए मेरो हजुर ३ र यात्रा दुवैमा अभिनय गरेका कलाकार रेयर राईसँग हामीले रमाइलो गफगाफ गरेका छौ ।
तपाई नाम कस्तो अनौठो र मीठो ?
मीठो त होइन अनौठो चाहिँ हो । मीठो त चक्लेट पो हुन्छ त ।
तपाइँ कहाँ जन्मनु भयो ?
जन्मेको सोलुखुम्बु हुर्केको मोरङ र क्यारियर चाहिँ भक्तपुरमा आएर बनाएको हो । कलेज नियमित हुन सकेन फेल पनि भइयो । बिचमा करिब ५ वर्ष ब्रेक भयो । त्यही बेलामा नृत्य लगायत अन्य अभिनय सम्बन्धि कुराहरू सिकें । चपली हाइट–२ गरि सकेपछि फेरी पढ्नु पर्छ भन्ने लागेर आयो । पछि ११–१२ पास गरेर छाडियो ।
नृत्य गर्न कत्तिको आउँछ ?
खासै राम्रो आउँछ जस्तो त लाग्दैन तर सबैले राम्रो नृत्य गर्छ भन्ने सुनेको छु ।
अभिनय गर्ने बिचार कहिले देखि आयो ?
घर तिर कहिले काहीँ नाच्ने गर्थें । बाबा आमा मामाह?ले पनि ठिकै छ भन्नु हुन्थ्यो । यो कलाकारिता क्षेत्र भनेको अलि विस्तृत छ त्यसैले लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने भई रहेको थियो । त्यहि बेलामा गाउँतिर सडक नाटक खेल्नको लागि एउटा ग्रुप आयो । त्यसरी नाटकमा खेल्न दुइसय दिनु पर्छ भने भने र दिइयो । कसैले बोलाउँदै बोलाएन त्यत्तिकै हरायो । पहिले फुटवल खेल्ने भएकोले फुटवल खेल्ने कि अभियन गर्ने भयो । पछि अभिनय गर्ने निर्णय भयो । यसका लागि काठमाडौं जानु पर्छ भने ल जानेभने जाने भनि कुरा चल्यो आज कुरा गरियो भोलिपल्ट कुदिहालियो । तर काठमाडौं कोही थिएन संघर्ष गरियो यहाँ सम्म आइपुगियो ।
चलचित्र यात्रामा कसरी अनुबन्धित हुनु भयो ?
मेरो पहिलो चलचित्र चपलिहाइट २ हो । वहाँह?लाई एउटा छट्टु र रमाईलो गर्ने खालको चरित्र भएको कलाकार चाहिएको रहेछ । वहाँहरूले त्यही हेरेर मलाई अफर आयो र मैले यसमा अभिनय गर्ने अवसर पाएँ ।
सुटिङका बेला कहाँ कहाँ घुम्नु भयो ?
सुटिङको बेला ९२ दिन क्यामराका अगाडि बसियो । सोलुछोडेपछि म कहिले पनि त्यहाँ गएको थिइन यसै फिल्म गर्दा जाने मौका पाएँ । त्यसपछि हेटौडा २६ दिन बसियो केहि गीत र फाइट सिनहरू छायाँङ्कन भयो ।
सुटिङको बेलामा भएको अविस्मरणिय क्षण ?
हामी कलाकारहरू राती सुत्दा खेरी एक्लाएक्लै सुत्ने गथ्र्यौं । भूतसम्बन्धी कथा भएकोले त्यसै अनुसार अभिनय गर्दा राती केटी देखिने कहिले जन्म दिन मनाएको कहिले के गरेको कहिले के गरेको । ख्याल ख्याल गर्दा साँच्चै जस्तै सबै डराउने भइयो र एकै ठाउँमा सुतेको क्षण विर्सनै सकिँदैन ।
भूतप्रेतमा कत्तिको विश्वास लाग्छ ?
छ भन्न पनि सकिन्न र छैन भन्न पनि सकिँदैन
यात्रामा काम गरेप िछ कत्तिको अफर आएको छ ?
यात्रा पछि मैले मासुभात भन्ने चलचित्रमा अभिनय गरेको छु । रामेछापतिर आप्mनै मान्नछेहरूले पनि स साना बच्चाहरूलाई झुक्याएर बेच्ने गर्दा रहेछन् त्यसै विषयलाई आधार बनाएर बनेको चलचित्र रहेछ त्यसमा कथामा बच्चाको आमाले भनेको एउटा डायलग जस्तैः ए हाम्रा छोरी चेली बेचि तिमीहरू मासुभात खाने... भन्ने लाई आधार बनाएर बनेको चलचित्र छ यो ।
घरको अन्य काम गर्न कत्तिको गर्ने गर्नुभएको छ ?
म सानैदेखि खाना बनाउने गर्थे । आमा घर बाहिरको काममा जानु पर्ने भएको घरमा दिदि बहिनी नभएकोले खाना बनाउन बाध्य हुनु पथ्र्यो । हामी तीन दाजुभाई थियौं म चाहिँ माइलो । दाई दाई बन्ने काम नगर्ने भाई सानो अह«ाउन नमिल्ने म चेपुवामा पर्र्थे । आपूmलाई खेल्न ज्यादै मनपर्ने । खासगरी म फुटवल खेल्न ?चाउने भएकोले अलिकति चामल अलिकती पानी हाल्यो अनि आगो बालेर छाडीदिने कहिले मीठो पनि हुन्थ्यो, कहिले काँचो, कहिले अधकल्चो त कहिले डढेको हुन्थ्यो ।
दश कक्षा पढ्ने बेलासम्म केटी साथीहरूसँग बोल्दै नबोल्ने । पछि मोरङमा कलेज जाँदा थाहै नपाई एक जना सँग लव पर्यो । त्यसपछि काठमाडौं आइयो । अनि छुटि गयो त्यसपछि कसैसँग सम्बन्ध बनेको छैन । अहिले सम्म कोही कसैबाट न त विहेको लगि न त डेटिङको लागि अफर आएको छैन आयो भने विचार गर्नु पर्ला अब त उमेर पनि भयो नि हैन र ?